Ukuvinjelwa kweSuez Canal kuzothinta imboni ye-elekthronikhi | Izindaba ze-IPhone
UToni Cortés | | eziningana
Sonke sisibonile isithombe esishaqisayo somkhumbi ezindabeni Okunikeziwe wawela eSuez Canal. Ngemuva kokucabanga i- "pitote" okumele ngabe ihlanganiswe ezinhlangothini zombili zesiteshi, imikhumbi ingakwazi ukuyiwela, sisheshe sikhohlwe isihloko sicabanga ukuthi lokhu "kukude kakhulu" ngaphandle kokukunikeza ukubaluleka okukhulu.
Kepha iqiniso ukuthi lokho kusho ukuvimba kokunye kokuwela izitsha zemifula ezibaluleke kakhulu emhlabeni kungathinta ukuthengwa kwempahla kwanoma yimuphi umkhiqizo emhlabeni wonke, kungaba ngokumisa umkhiqizo ngenxa yokushoda kwezinto, noma ukubambezeleka kokulethwa kwezinto eziqediwe ezilungele ukufinyelela ezikhungweni zokusabalalisa.
Ukuvinjelwa okwenzekile eSuez Canal ngokungangabazeki kuzothinta ukuthengiswa kwempahla emhlabeni jikelele, kufaka phakathi ukubambezeleka kokuthunyelwa izinto zikagesi namadivayisi emasontweni ambalwa alandelayo, kucatshangwa ukuthi kungalungiswa ezinsukwini ezimbalwa ngokuhamba phambili.
1 Ngesiphepho sesihlabathi
2 U-12% wemakethe yomhlaba udlula eSuez Canal
3 I-Apple kungenzeka ingathinteki kakhulu yi
I-Ever Given, omunye wemikhumbi emikhulukazi emikhunjini yemikhumbi emhlabeni, yaphonseka emanzini ISuez Canal ngoLwesithathu, phakathi nesiphepho sesihlabathi. Umkhumbi udlulile futhi waboshwa kulo mfula, uvimba omunye wemizila yezohwebo ematasa kakhulu emhlabeni.
Usuvele ubangele isiminyaminya ngokuvinjelwa kwe- amakhulu emikhumbi kanye nezilinganiso ezibanzi zokuzulazula njengamachweba agcwele iziqukathi ezimile. Yize iziphathimandla zisebenza ngokuxhamazela ukusula umsele ezinsukwini ezimbalwa, noma 'i-hiatus' emfushane ingaba nomthelela omkhulu ekuhlinzekweni kokuthengwa komhlaba.
Umthelela wokuminyana kwezimoto usuvele uzwakala ngamaketanga okuthumela "ngesikhathi esifanele". Uma i-Ever Given ihlala ibambekile isonto noma izinsuku ezingaphezulu, imizila yokuthumela olwandle izohlupheka futhi uzongeza okungenani izinsuku ezingeziwe eziyi-10 ngezikhathi ezijwayelekile zokulethwa.
U-12% wemakethe yomhlaba udlula eSuez Canal
Emaceleni we U-12% wokuhweba emhlabeni ijikeleza ngeSuez Canal. Futhi ngenkathi imikhiqizo eminingi yabathengi ethunyelwa e-US ifika eWest Coast isuka e-Asia, isiminyaminya sezimoto sizominyana emachwebeni asevele ehlangabezana nokubambezeleka nokubambezeleka ngenxa yobhadane lwe-coronavirus nokwanda kwesidingo sabathengi.
Abakhiqizi abaningi bezinto bathumela izinto zabo ezizwela isikhathi emoyeni, ngakho-ke akucaci ukuthi abahlanganisi abazothinteka kangakanani. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthi isehlakalo saseSuez Canal «thinta imikhiqizo eqediwe kunabenzi bezingubo ngokwabo, ”kusho umhlaziyi weGartner Research u-Alan Priestley etshela iThe Wall Street Journal.
Yize izilawuli zemisele zingakwazi ukuntweza kabusha umkhumbi kuleli sonto, imikhumbi ebekwe eceleni ngeke ikwazi ukuhamba ngokushesha ngomsele. Ukuhlolwa kwemizila yokuhweba, kanye nemikhawulo yejubane, kuzobambezela ukubuyela kuthrafikhi ejwayelekile izinsuku eziningi. Konke lokhu okucabanga ukuthi i-Ever Given akulimalanga. okudinga ukuthi idonswe kusuka emseleni, ukusebenza okuhamba kancane kakhulu kunokuthi uma uyiwela wedwa.
I-Apple kungenzeka ingathinteki kakhulu yi
Uma kuqhathaniswa nabanye abenzi bedivayisi, i-Apple ayikaze ithintwe ukusweleka kwe-chip yomhlaba okukhona namuhla. Ngaphezu kwalokho, ayijwayele ukusebenzisa ukuthuthwa kolwandle kakhulu ukulethwa ngemuva kokwethulwa okusha, ngenxa yokujaha okubandakanya lokhu.
Nokho, I-Apple ibe nezinkinga zokuphakela esikhathini esedlule okuhlobene nokubambezeleka kolayini bokuthumela, ngoba ihlinzeka ngezikhathi ezithile isitoko sezitolo zayo ngokuthunyelwa okuhleliwe ngomkhumbi, ngenkathi ithumela ama-oda kubasebenzisi bayo ngendiza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » eziningana » Ukuvinjelwa kweSuez Canal kuzothinta imboni yezobuchwepheshe
I-Apple ihola ukuthengwa kwezinkampani zobuhlakani bokufakelwa eminyakeni yamuva